China Diethyl Aminoethyl Hexanoate (DA-6) orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Lemandou
CAS No. 10369-83-2 Milanja molekiola 215,33
molekiolan'ny C12H25NO2 Teboka mitsonika 226-235°C
fahadiovana 98,0% min. Fahaverezan'ny fanamainana 0,5% max
Bika Aman 'endrika Vovoka kristaly fotsy
Diethyl Aminoethyl Hexanoate dia afaka manatsara ny fitomboan'ny vokatra, mampitombo ny vokatra ary manatsara ny kalitaon'ny vokatra. Izy io dia afaka mampitombo ny asan'ny peroxydase sy ny nitrate reductase, mampitombo ny atin'ny kôlôlôlfà, manafaingana ny hafaingan'ny fotosintesis, mampiroborobo ny fizarazarana sy ny fanitarana ny sela zavamaniry, mampiroborobo ny fivoaran'ny faka ary mametra ny fifandanjan'ny otrikaina ao amin'ny vatana.
Diethyl Aminoethyl Hexanoate dia afaka mampitombo ny chlorofila, ny proteinina, ny votoatin'ny asidra nioklealy ary ny taham-potosintetikika ao amin'ilay zavamaniry, mampitombo ny asan'ny peroididase sy ny redactase nitrate, mampiroborobo ny fatran'ny gazy karbonika sy azota an'ny zavamaniry, ary manatsara ny fitrohana ny rano sy ny zezika ary ny fanangonana ny maina zavatra avy ny zavamaniry. Amboary ny fandanjana ny rano, ampio ny fanoherana ny aretina, fanoherana ny haintany, ary fanoherana mangatsiaka ny voly sy ny hazo fihinam-boa, manemotra ny fahanteran'ny zavamaniry, mampiroborobo ny fahamatoran'ny vokatra, mampitombo ny famokarana, ary manatsara ny kalitaon'ny vokatra, amin'izany dia mahatratra ny vokatra sy ny kalitao.
(1) Spektrum malalaka, izay azo ampiasaina amin'ny fambolena sy fambolena sakafo isan-karazany;
(2) Fampiasana maharitra, mety amin'ny vanim-potoana fitomboan'ny zavamaniry;
(3) Vidiny ambany sy tombony be, ny vokatry ny fampitomboana ny famokarana dia mihoatra ny mpanentana fitomboana hafa;
(4) Hatsarao ny fahombiazan'ny zezika sy ny fahaizan'ny bibikely, ary hampiakarana ny tahan'ny fampidirana;
(5) Manatsara ny kalitaon'ny vokatra;
(6) Izy io dia misy fiantraikany manokana amin'ny detoxification ary mampihena ny fitotoam-panao.
Previous: Paclobutrazol (PP333)
Manaraka: 4-Chlorophenoxyacetic Acid (4-CPA)